Xisaabiyaha Lacag-bixinta ee 'AJAX' ayaa taagan! | Martech Zone
Axad, Oktoobar 1, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Booqo Xisaabiyaha Lacagta
Had iyo jeer waad ogtahay markaan maqnaado dhowr maalmood - waxay la macno tahay inaan qaadanayo kafeyn badan oo aan qorsheynayo maskaxdayda. Mid ka mid ah mashaariicdii ugu horraysay ee aan abid sameeyo waxaa ka mid ah barnaamijyada xogta waxqabadka shaqaalaha ee Microsoft Access 2.0! Muuqaal aan ku daray (maaddaama waaxdeenna HR u baahan tahay in dhammaan qiyamka la buuxiyo) wuxuu ahaa xisaabiyaha kororka mushaharka. Waxaan ugu talagalay iyada oo ah foom ka mid ah keydka xogta iyo natiijooyinka lagu daabacay warbixin.
Waxaan ka dhisay degelkan anigoo isticmaalaya Dreamweaver (Waxaan ahay nin 'notepad school' laakiin waxaan go'aansaday inaan tallaal ku siiyo). Waxaan ku sameeyay sawir gacmeedka Sawirka. Waxaan u adeegsaday CSS dhammaadka hore 100%, oo xitaa waxaan haystaa nooc CSS Daabac ah (horay u sii soco oo daabac natiijooyinka waad arki doontaa). Dhamaadka hore waxaa dhiirrigeliyay 37Signals… fiican oo fudud, laakiin wax yar xarrago leh. Weli waxaan hayaa natiijooyinka miiska ku jira - laakiin taasi ujeeddo ayey u tahay maxaa yeelay waxaan rabaa in dadku awood u yeeshaan inay nuqul ka sameystaan ​​oo ay ku dhajiyaan natiijooyinka Excel ama pogram kasta oo kale. Waxaa jira waxyaabo badan oo quruxsan oo ku saabsan arjiga. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay!
Hubso inaad ii soo sheegto wixii cayayaanka ah Tallaabada xigta waa isku-darka mashiinka Shaqo Raadinta iyadoo loo adeegsanayo Runtii dhammaadka. Malaha isbuuca dambe!
Gobolka Washington wuxuu ka dacweeyaa Apple adeegsiga 'Apple' iyo 'Macintosh'